ထို့ကြောင့် Watch! - အလက်ဇန်းဒါး Grenehed ၏စာအုပ် | Apg29
ထို့ကြောင့် Watch! - အလက်ဇန်းဒါး Grenehed ၏စာအုပ်
အလက်ဇန်းဒါး GRENEHED ။
အခုတော့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေ "ထို့ကြောင့် Watch!"
စာအုပ်ရဲ့ 263 စာမျက်နှာများနှင့်အတူ, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ရဲ့စကားလုံးသညျယရှေုဆိုက်ရောက်နှင့် ဆက်စပ်. အတွက်အလွန်နောက်ဆုံးအချိန်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့မိန့်ညွှန်ပြ, ဆှီဒငျပြည်သူ့ကျမ်းစာကနေအများအပြားပုံနှိပ်ကျမ်းစာ၌ပါအတူချင်ပါတယ်။
0705130619 အပေါ် swish ပေးဆောင်
သငျသညျ swish မ အကယ်. အမိန့်သောအခါ, ဒါကြောင့်ဖော်ပြထားခြင်းပါ။
စျေးနှုန်းက 100 SEK + 50 SEK ရေကြောင်း / စာအုပ်
Vecka 29, fredag 19 juli 2019 kl. 02:30